रेश्मालाई नाटकजस्तो लाग्छ ‘भष्मे डन’को व्यवहार – Online Khabar
२०७४ असोज २६ गते १०:५९
aadarsha manche chahi ghar agadi ko chaur ma buschara?
२०७४ असोज २४ गते १३:२५
ghar ghar ko katha lekhnu bhanda pani kunai aadarsha bekti ko barema lekhnu jas bata aru manxe lai agadi badhna prerna milos.
घरमा पनि सिनेमाकै भूमिकाको रिहर्सल
२०७४ असोज २४ गते ११:५२ मा प्रकाशित
आकाशको बादलजस्तै उनको मनोदशा छिन-छिनमा बदलिइरहछ ।
कहिले उनी उरेन्ठेउलो युवकजस्तै उटपट्याङ गर्छन्, कहिले कुनै दार्शनिकझैं गम्भीर देखिन्छन् । कहिले भिक्षुजस्तै शान्त एवं सौम्य देखिन्छन्, कहिले महा-जड्याँहा जस्तै लथालिंग हुन्छन् ।
यस्तो हालतमा देख्दा दुई वर्षअघि विवाह गरेकी पत्नीलाई अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
‘अहिलेचाहिँ उनले पचाउन थालिन्,’ कलाकार विपिन कार्की भन्छन्, ‘मेरो आनीबानी उनलाई सबै थाहा भइसक्यो ।’
यो उनको स्थायी बानी भने होइन । बहुरुपी मुद्रा त चलचित्रको भूमिका अनुसार बदलिरहन्छ । चलचित्रमा जस्तो क्यारेक्टर पाउँछन्, त्यसलाई उनी निजी जीवनमा पनि अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् ।
बाटोमा हिँडिरहेको बेला होस् या किनमेलमा गएको बेला, उनी आफ्नो भूमिकाकै मुद्रामा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् । कहाँसम्म भने घरभित्र पत्नीसँग पनि उनी बन्न लागेको नयाँ चलचित्रकै भूमिका रिहर्सल गरिरहेका हुन्छन् ।
पशुपतिप्रसादको ‘भष्मे डन’ बनिरहँदा उनको घरमा विपिन होइन, भष्मे डन’ हाबी हुन्थ्यो । छड्केको ‘विन्दु’ बन्दा पनि त्यस्तै ।
सामान्य दिनमा समेत विपिन आफूले भेटेका, देखेका, संगत गरेका व्यक्तिको आवाज, हाउभाउ, हुलिया टिप्छन् । त्यसलाई फ्युजन गरेर एउटा ‘सग्लो पात्र’ तयार गर्छन् । र, त्यही पात्रमा आफूलाई रुपान्तरण गर्ने अभ्यासमा हुन्छन् । ठीक त्यहीबेला हो, पत्नीले उदेक मान्ने । पतिले ‘नाटक’ गरिरहेका हुन्’ भन्ने पत्नीलाई थाहा हुँदैनथ्यो अनि उनी दिक्क मान्थिन् ।
अहिले भने विपिनको बहुरुपी हाउभाउ घरमा सामान्य भएको छ । उनको मुड चेन्ज हुँदा पत्नी ठान्छिन्, ‘बुढाले नाटक गरिरहेका छन् ।’
‘कहिलेकाहीं त मेरो यथार्थ भावलाई पनि उनी नाटक नै ठान्छिन्,’ विपिन भन्छन् ।
कहिलेकाहीं विपिनलाई रिस उठ्छ । पत्नी सोच्छिन्, बुढाले रिसाउने क्यारेक्टर पाएछन् । कहिले विपिन मिजासिलो हुन्छन् । पत्नी सोच्छिन्, बुढाले सालिन भूमिकामा अभिनय गर्ने भएछन् ।
भष्मे डनलाई पक्रिन मुश्किल पनि छैन, असम्भव पनि छैन ।
भक्तपुर कौशलटारको एउटा फ्ल्याटमा विपिन र पत्नी रेश्मा कटुवाललाई भेट्न सकिन्छ ।
बिहेअघि विपिनको मनमा नलागेको होइन, कतै बिहे गरेपछि करिअरमा असर गर्ने हो कि ?
तर, त्यस्तो भएन । बरु फलिफाप पो भयो । संयोग पनि कस्तो भने बिहेलगत्तै उनले ‘पशुपतिप्रसाद’मा अभिनय गरे । त्यसैबाट ‘भष्मे डन’को चर्चा पाए । लगत्तै उनले केही यस्ता फिल्म पाए, जसबाट उनले नयाँ-नयाँ चरित्रलाई जन्म दिए । ती चरित्र गजबले रुचाइयो पनि ।
जब कुनै स्क्रिप्ट हात पर्छ, त्यसबारे विपिनको पहिलो छलफल रेश्मासँगै हुन्छ । रेश्माले सुझाव दिन्छिन्, के गर्ने/के नगर्ने भनेर । यसले उनलाई निर्णय गर्न सजिलो भएको छ ।
‘अहिले त कुनै स्क्रिप्ट आयो भने पहिला पढ्ने उनैले हो,’ विपिन भन्छन्, ‘उनले चित्त बुझाएमा म अगाडि बढ्छु ।’
उनीहरुका सन्तान छैनन् । तत्काल त्यसको योजना पनि बनाएका छैनन् ।
विपिन र पत्नी रेश्माको धेरै स्वभाव मिल्छ । नमिल्ने एउटै स्वभाव भनेको रेश्मा व्यायाम गर्न अल्छि मान्छिन् ।
बिहान सबेरै उठ्ने विपिनको बानी छ । उठेपछि फ्रेस हुन्छन्, चिया पकाउँछन् । पत्नीलाई ओछ्यानमै चिया टक्र्याउँछन् । अनि व्यायाम गर्न थाल्छन् । पत्नी भान्सामा खानेकुरा तयार गर्न थाल्छिन् ।
व्यायामपछि नुहाइ-धुवाइ गरेर विपिन पनि भान्सामा पुग्छन् । उनीहरुको चलन छ, दुवै मिलेर खाना पकाउने । खाना पकाउन दुवैलाई आउँछ, जाँगर पनि चल्छ । भाँडा वर्तन सफा गर्ने काम भने पत्नीकै भागमा ।
‘भाँडा माझ्नचाहिँ मलाई अलि अल्छि लाग्छ,’ विपिन भन्छन् ।
रेश्मालाई माछामासुमा त्यति रुची छैन । उनकै संगतले विपिनलाई पनि माछामासुको स्वाद खल्लो लाग्न थालिसक्यो । खानपानपछि कोठा सफा गर्ने, लुगा धुने सबै काम उनीहरु एकसाथ गर्छन् ।
वाइन अनि रोमान्टिक साँझ
दुवैको प्रयास हुन्छ, दाम्पत्य जीवनलाई सकेसम्म सुखमय र यादगार बनाउने । यसका लागि उनीहरु के पो गर्दैनन् । कहिले साँझ कुनै रेस्टुराँमा मीठो परिकारको स्वादमा रमाउँछन्, कहिले बाइकमा हुइँकिँदै टाढा-टाढासम्म चक्कर मार्छन् । र, कहिले आफ्नै घरमा वाइन भरिएको गिलास उठाएर चियर्स गर्छन् ।
‘हामी एकदमै रोमान्टिक छौं,’ विपिन भन्छन्, ‘एकअर्कासँग रमाउने, खुशी हुने बहाना खोजिरहेका हुन्छौं ।’
पति-पत्नीमा यदाकदा मनमुटाव त हुन्छ नै । तर, ठाकठुक लामो समय टिक्दैन । पत्नी रिझाउने कला पेश गरिहाल्छन्, विपिन । ‘उनी रिसाइरहेकी हुन्छिन्,’ विपिन भन्छन्, ‘कहिले जोक गरेर हँसाउँछु, कहिले एक्टिङ पनि गरिदिन्छु ।’
फकाउने अर्को तरीका पनि रहेछ । पत्नी रिसाएको थाहा पाएपछि विपिन लुक्छन् र फोन गरेर ‘आफू केही दिन बाहिर गएको’ सुनाउँछन् । रेश्माले केहीबेर पत्याउँछिन् । खिन्न हुन्छिन् ।
केही छिनमै विपिन पत्नीको अगाडि अप्रत्यासित रुपमा प्रकट हुन्छन् । पत्नी, मख्ख । बुढाको मायालु हर्कत देखेपछि रेश्माको रिस पग्लिन समय लाग्दैन ।
विपिनलाई माटोको सुगन्ध मन पर्छ । माटोसँग निकट हुन र प्रकृतिसँग एकाकार हुन मनलाग्छ । छतमा फूल रोपेका छन् । फूल गोडमेल गर्ने, पानी हाल्ने काम उनकै हो । हावामा फूल बयेली खेलेको हेरिरहँदा उनलाई बिछट्टै रमाइलो लाग्छ ।
नाटक गर्दा गुरुहरु भन्ने गर्थे, कलाकार भएपछि माटोसँग खेल्नुपर्छ, नजिक हुनुपर्छ । उनले त्यसलाई हृदयबाटै आत्मसात गरे । जग्गा भाडामा लिएर स्ट्रबेरी खेतीसमेत गरे ।
ठेकेदारले अात्महत्या गर्छु भने, वकिलले महाअभियोग लगाए !